Cookies & Statistics | Tyelela uHultsfred
ekhaya » Iicookies kunye neziBalo
Iicookies kunye neziBalo2020-10-26T10:01:12+01:00
Le webhusayithi inezinto ekuthiwa ziicookies.
Ngokomthetho woNxibelelwano lwe-elektroniki, owaqala ukusebenza nge-25 kaJulayi ka-2003, wonke umntu otyelela iwebhusayithi ene cookies kufuneka aziswe ukuba iwebhusayithi ineekuki, zisetyenziselwa ntoni ezi cookies kunye nendlela ezinokuthintelwa ngayo. Icookie yifayile encinci yedatha egcinwa kwiiwebhusayithi kwikhompyuter yakho ukuze bakwazi ukubona ikhompyuter yakho kwixa elizayo xa undwendwela iwebhusayithi. Iicookies zisetyenziswa kwiiwebhusayithi ezininzi ukunika undwendwe ukufikelela kwimisebenzi eyahlukeneyo. Ulwazi olukwi-cookie lunokusetyenziselwa ukulandela ukubrawuza komsebenzisi. Icookie ayenziwa kwaye ayinakusasaza iintsholongwane zekhompyuter okanye enye isoftware enobungozi.
Iicookies zisetyenziswa njengezixhobo, umz. ukuze ndi:
- gcina useto lwendlela iwebhusayithi ekufuneka iboniswe ngayo (isisombululo, ulwimi njlnjl)
Vula ukuhanjiswa okubhaliweyo kolwazi olubuthathaka kwi-Intanethi
-nika amandla ukuqaphela ukuba abasebenzisi bayisebenzisa njani iwebhusayithi kwaye baqokelele ubungqina bokuba iwebhusayithi ingaphuhliswa njani ngokubanzi
-qhagamshela ukuvezwa komsebenzisi kwintengiso kwiiwebhusayithi kwintengiselwano yakhe yorhwebo njengesiseko sokubala umvuzo
iwebhusayithi kunye neenethiwekhi zentengiso
-qokelela ulwazi malunga nokuziphatha kwabasebenzisi ukuze bahlengahlengise kwaye banciphise umxholo kunye nentengiso yeewebhusayithi ezityelelweyo kwezi ndlela zokuziphatha.
Le webhusayithi isebenzisa iicookies ukulinganisa ukugcwala kunye noncedo lwenkonzo yewebhu "Uhlalutyo lukaGoogle" olusebenzisa ii-cookies, iinkcukacha zabatyeleli ziqokelelwa kwiwebhusayithi. Olu lwazi lusetyenziselwa injongo yokuphucula umxholo wewebhusayithi kunye namava omsebenzisi. Iicookies zikwasetyenziselwa ukunika umsebenzisi ukufikelela kulomsebenzi ukukhumbula ukhetho lwelizwe / ulwimi kude kube lixesha elizayo xa undwendwe lusenza utyelelo kwisikhangeli esinye. Iicookies zikwasetyenziselwa ukukhumbula nakuphi na ukwenziwa ngokwezifiso kokufumaneka.
Iicookies kunye nenye itekhnoloji egciniweyo okanye egcina idatha kwikhompyuter yomsebenzisi inokusetyenziswa kuphela ngemvume yomsebenzisi. Imvume inokunikwa ngeendlela ezahlukeneyo, umzekelo ngebrawuza. Kwiseto sesikhangeli, umsebenzisi unokuseta ukuba zeziphi iicookies ekufuneka zivunyelwe, zivaliwe okanye zisuswe. Funda ngakumbi malunga nendlela okwenziwa ngayo kwicandelo loncedo lwesikhangeli kunye nolwazi oluthe kratya jonga http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/.
Qaphela ukuba le webhusayithi isebenzisa ii-cookies ukwenza lula umsebenzisi kunye nokwenza ukuba isebenze ngokupheleleyo.